महामारी सकिएलगत्तै बालमैत्री वडा घोषणा गर्छौँ : घनश्याम - हाम्रो शब्द
महामारी सकिएलगत्तै बालमैत्री वडा घोषणा गर्छौँ : घनश्याम
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका वडा नं ९ का वडाअध्यक्ष घनश्याम चौधरीसँग हाम्रो शब्दले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :
कोरोना महामारी सुरु हुनेबेला तपाईको वडा बालमैत्री घोषणाको अन्तिम चरणमा थियो हैन ?
हो, कोरोनाले समस्या सिर्जना गर्यो । महामारी सकिएलगत्तै बालमैत्री वडा घोषणा गर्छौँ । महामारीका बिच पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित काम गरिरहेका छौँ ।
बालमैत्री घोषणाका कतिपय सूचकहरु पुरा नभई पनि तपाईहरु घोषणामा अलि हतार गर्नुहुन्छ नी ? के घोषणा गर्दैमा बालमैत्री हुन्छ ?
तपाईको कुरा ठिकै हो । घोषणा मात्रै ठुलो कुरा त होइन । तर, हाम्रो वडामा धेरै सूचकहरु पुरा भइसकेका छन् । तपाईले भनेजस्तै केहि बाँकी होलान्, ती गर्दै जान्छौँ । मुख्य चुनौति अहिले पुरा भएका सूचकहरुलाई कसरी दीर्घकालिन बनाउँने भन्ने हो ।
‘यो आर्थिक बर्ष भित्र रामधुनीका सबै वडा कार्यालय आफ्नै भवनमा हुनुपर्ने छ’ भनेर नगरसभाले निर्णय गरेको छ । तपाईको वडा कार्यालय निर्माणको काम कति भयो ?
…..(मन्द मुस्कानमा).. करिब ९० प्रतिशत सकियो । माघसम्ममा त सबै सकिन्छ ।
तपाईको तिनबर्षे कालर्यकाल कसरी बित्यो ? के के गर्नुभयो ?
धेरै काम भएका छन् । सडकको साइडमा नाला बनाउँने काम धेरै भएको छ । वडा कार्यालय बन्दैछ । स्वास्थ्य चौकी पनि वडासँगै बनिरहेको छ । प्रहरी चौकी राख्नका लागि जग्गा उपलब्ध भइसकेको छ । वडाबासीलाई कृषि र पशुपालनमा जोड दिएका छौँ । सामुहिक खेतीका लागि वडाले अभियान नै चलाएको छ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब १ करोड बराबरको बोरिङ् निर्माणको काम भइरहेको छ । सानाखाले ३३ ओटा बोरिङ् बितरण नै गरिसकेका छौँ । बाख्रापालनलाई थप सहजता होस् भनेर ८०० ओटा बोयर बोकाको बिउ पोखराबाट ल्याएका छौँ, त्यो अब बितरण गर्छौँ । टोल–टोलमा हामी आफैँ गएर सामुहिक खेतीका लागि मोटिभेसन् गरिहेका छौँ । सिकर्मी र डकर्मी तालिम दिएर प्रमाणपत्र पनि दिएका छौँ ।……
स्वरोजगार बन्न युवाहरुका लागि बिषेश केहि ?
म भन्दैछु । बिषेश गरी युवा उमेरका महिलाहरुका लागि सिपमुलक तालिम (ब्युटिसिएन, सिलाई–कटाई) दिएका छौँ । सिकर्मी र डकर्मी तालिमको कुरा गरिहाले । कोरोना महामारीबाट रोजगारी गुमाएकाहरुका लागि यो बर्ष नै केहि राम्रा कार्यक्रम ल्याउँन सकिएन । आगामी बजेटबाट युवाहरुलाई बिषेश प्राथमिकतामा राखेर स्वरोजगार बन्न सहयोग गर्छौँ ।
युवाहरुका लागि घरेलु उद्योगमा प्रोत्साहन गर्न अनुदानसहितको कार्यक्रम ल्याउँन सकिदैँन ?
यो बिषयमा म सोचिरहेको छु । अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । कम्तिमा बर्षमा १० जना युवाहरुलाई मात्रै भए पनि घरेलु उद्योगमा लाएर स्वरोजगार बनाउँन सके राम्रो हुन्थ्यो । आगामी बजेटमा हामी यसलाई प्राथमिकता दिन्छौँ ।
तपाईको वडामा शिक्षाको अबस्था चै कस्तो छ ?
हाम्रोमा ४ ओटा संस्थागत र २ ओटा सामुदायीक विद्यालय छन् । मलाई लाग्छ, अन्यन्त्रको तुलनामा हाम्रो वडाको शिक्षा अबस्था त्यस्तो नराम्रो छैन । थप गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने कुरामा त हामी लागिरहेकै छौँ ।
– वडाअध्यक्ष घनश्याम चौधरीसँग हाम्रो शब्दले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
भोजपुरको आमचोकमा खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै